प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न : मानमा देशभक्ति छैन भने त्यो के नेपाली? |प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न : मानमा देशभक्ति छैन भने त्यो के नेपाली? – हिपमत
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालीहरुमा कुनैपनि हालतमा देशभक्तिको भावना हट्न नहुने बताएका छन् । बिहीबार आफू निकट प्रेस संगठनको दोस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले देशभक्ति मन र भावनाको हिसावले नभए त्यो नेपाली नै हुन नसक्ने बताए ।
‘नागरिकता वा प्रमाणपत्रमा त होला तर मन र भावनामा देशभक्ति छैन भने त्यो के नेपाली ?’प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गरे ।
उनले आफूले भारतीय टिभीलाई दिएको अन्तवार्ता एक नेताले नौटंकी भएको भनेर अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आक्रोस पोखे ।